သောင်းပြောင်းထွေလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 329
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ ဒို့ တောင်ပြုံး သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Dagon Taryar – Politics and Writings
နိုင်ငံရေးသမားနှင့် စာရေးဆရာဒဂုန်တာရာဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဤဆောင်းပါးကို ဒဂုန်တာရာ၏ “ စာလုံး၊ ဆေးစက်၊ စောင်းကြိုးနှင့် ကတ္တီပါကားလိပ်” စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်ပါသည်၊ နိုင်ငံရေးသမားနှင့် စာရေးဆရာ အကြောင်းရေးထားသော်လည်း နိုင်ငံရေးနှင့် အနုပညာအဆက်အစပ်သည် ပရိသတ်အပေါ်မှာပဲ အဓိကအခြေပြုထားရ သည့်သဘောကိုပါ မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆမိသဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ (အယ်ဒီတာ)……..နိုင်ငံရေးသမားနှင့် စာရေးဆရာကို မနှိုင်းယှဉ်မီ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဘာလဲ၊ စာရေးဆရာဆိုတာ ဘာလဲကို ရှင်းပြဖို့ လိုပေလိမ့်မည်၊ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဘာလဲ၊နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးတောင်းဆိုချက်ကို လူထုအင်အားဖြင့် လှုပ်ရှားမှုပြုမူခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ စာပေဆိုတာ ဘာလဲ၊စာပေဆိုသည်မှာ လူ့ဘ၀အကြောင်းအရာကို စာဖတ်သူ ရသအပေါ်အောင် ဖွဲ့နွဲ့ထားသော အရေးအသားဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်သူသည် နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ စာပေရေးသားသူသည် စာရေးဆရာဖြစ်သည်၊ ဤသို့ အကြမ်းဖျင်းသိရသည်၊ သည့်ထက် တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ဆိုရလျှင်...
ကာတွန်းစောငို – အလိမ္မာ စာမှာပဲ ရှိတယ်၊ ငဒို့မှာ ရှိဘူး သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – ကြံကြီးစီရာ လွှတ်တော် သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – သြဂုတ်လ၊ တတောလုံးကြွေ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – သြဂုတ်လ၊ တတောလုံးကြွေ သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – လယ်လုပ်သူ တပ်မတော် လယ်ပိုင်သည် သြဂုတ် ၁၉ ။ ၂၀၁၃ Tags: သောင်းပြောင်းထွေလာ Related posts မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက်မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (0) ဇော်အောင် (မုံရွာ) – မေငြိမ်း-မြသီလာအလွမ်းပြေ၊ ကျော်ဇောခိုင်-တွေးခြင်းမဟာဗျူဟာများ၊ သောင်းဝေဦး- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီးဝဲလ်နှင့်မြစ်ကြီးနားတိုက်ပွဲ (0) ဇွန် ၁၆၊ မိုးမခရေဒီယို ဆစ်ဒနီ (0) Yu Ya – Belief inapoem … (0) Yan Linn Aung – Poem (0)
Saw Ngo – Burmese Way to Democracy
ကာတွန်း စောငို – သက်ဦးဆံပိုင် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ရေမြေ့ရှင်သမ္မတစနစ်(၃) သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Burmese Way of Life
ကာတွန်း စောငို – သက်ဦးဆံပိုင် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ရေမြေ့ရှင်သမ္မတစနစ်(၂) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Saw Ngo – Forever Law Forever President of Burma
ကာတွန်း စောငို – သက်ဦးဆံပိုင် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ရေမြေ့ရှင်သမ္မတစနစ် သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ခေတ်ပေါ် ခြေလေးချောင်း တော်လှန်ရေး သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 329 of 422«1...327328329330331...422»